"Tahaka ny fiantran’ny ray ny zanany no fiantran’i Jehovah izay matahotra Azy; fa Izy mahalala ny toetrantsika ka mahatsiaro fa vovoka isika."Salamo 103:13-14
"Fantatry ny Rainareo Izay any an-danitra …"Matio 6:32
Avy amina fianakaviana maro anaka i Toky, ary sembana, votsa saina, ka tena miteraka fahasahiranana betsaka ho azy izany. Ny zavatra vitan’ny anabavy keliny samirery ao anatin’ny dimy minitra, dia ilàny adiny iray, ary izay indray, mbola ampian’ny rainy. Miara-mijaly aminy sy malahelo azy ireo ray aman-dreniny. Mitovy avokoa ny fitiavany ireo zanany. Kanefa noho ny aretina mahazo azy, dia karakarain’izy ireo manokana i Toky. Sarotra kokoa ny fiainana ho azy, noho ny an’iretsy iray tampo aminy. Izany koa no antony ahazoany fitsimbinana sy tambitamby manokana avy amin’ireo ray aman-dreniny. Ampifanarahany amin’ny fahaizan’ilay zaza manao zavatra ny fanabeazana omeny. Mandrisika azy mba hatoky tena izy ireo, kanefa mitandrina ihany koa mba tsy hitaky zavatra be loatra, mety hahakivy azy.
Ry kristiana, misy angamba, eo amin’ny fiainana maha kristiana antsika, toe-javatra manokana ahatsapantsika «fahasembanana». Misy zavatra sasany, mora amin’ny hafa, kanefa toa tsy ho vitantsika mihitsy. Fantatry ny Raintsika izany. Mahalala tsara antsika Izy, fantany izay mampanahy na mampatahotra antsika, na izay mibahana ao an-tsaintsika. Fantany ireo fahalementsika, ny zavatra tsy sahintsika borahina amin’ny hafa… Io «fahasembanana» misy eo amin’ny tsirairay io, dia tiany hozakaina miaraka aminy, ary amin’izany Izy dia te hanorina fifandraisana feno tambitamby. Omeny fikarakarana tandrify azy ny tsirairay. Resaho aminy ny zava-manahirana afenintsika. Manana loharanon-kery tsy ampoizina Izy, hamenoany izay banga ao amintsika sy hampiroboroboany ny toetrantsika anaty. Aoka tsy hatahotra mihitsy ny hitaky ny fanampiany, mba hiara-mihoatra aminy izay tsy azo ihoarana.